मेलम्चीमा कसरी भयो भयावह अवस्था  ? के मौसम पुर्वानुमनाले काम नगरेको हो ? – Bikash Khabar
बिहिबार, ०३ आषाढ २०७८ गते ७:०७ मा प्रकाशित	Author विकास खबर संवाददाता	Comment(0)	265 Views
काठमाडौ, ३ असार। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाले मंगलबार साँझ नारायणी नदीमा पानीको बहावले खतरास्तर पार गरेको घोषणा गर्दै ‘अलर्ट’ जारी गरेको थियो । तर, सिन्धुपाल्चोकलाई भने धेरै जोखिमयुक्त मानेको थिएन ।
‘यी नदीमा राखिएका बाढीको पूर्वानुमान सूचकले साइरन बजाउन नपाउँदै सबै गुजल्ट्याएर लग्यो, उपकरण नै लगेपछि सूचना नपाउने अवस्था भयो,’ बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख जलस्रोत इन्जिनियर विक्रम श्रेष्ठले भने, ‘बाढी आएको भन्न नपाउँदै १० मिनेटको आसपासमै स्वाहा बनाइदियो ।’
बाढी पूर्वानुमान शाखाका अनुसार मेलम्चीमा पानीको बहाव पाँच मिटर रहेकामा मंगलबार साँझ ५ः४० बजेदेखि एक घन्टा एकाएक दुई–तीन मिटर झरेको थियो । किनभने खोला ५ः४० देखि ६ः४० बजेसम्म पहिरोले थुनियो । योबीचमा खोला पूरै थुनिने फेरि बढ्ने, फेरि थुनिने भइरह्यो ।
तर, साँझ ७ः१० बजे मेलम्चीमा पानीको सतह एकाएक बढेर ५.९८ मिटर पुग्योे । त्यसपछि खोलामा बाढी कति ठूलो आयो, कति पानी प¥यो भनेर महाशाखाले विवरण नै प्राप्त गर्न सकेन । किनभने बाढीको सूचक मात्र होइन, वर्षा मापन केन्द्र पनि बाढीले बगाएर लग्यो ।
मेलम्चीमा बाढी आउँदा तटमा रहेको बजार क्षतविक्षत बनेको छ । ‘खोलाको बगर, खोलाको संगमस्थलका बस्ती जोखिमयुक्त नै हुन्छन्, बस्ती बसाल्दा सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ खनालले भने, ‘बाढीपहिरोले क्षति गरेको मात्र खोजिन्छ । किन बाढी पहिरो आयो भनेर कारण खोजेर न्यूनीकरण गर्नेतिर ध्यान दिनुप¥यो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिक बाट
टी-२० विश्वकपः इङ्ग्ल्यान्डलाई हराउँदै न्युजिल्यान्ड पहिलो पटक फाइनलमा
२५ कार्तिक,काठमाडौँ । इंग्ल्यान्डलाई हराउँदै न्युजिल्यान्ड पहिलो पटक आईसीसी टी२० विश्वकपको फाइनलमा पुगेको छ। बुधबार राति सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई